Stop Land Grabbing Now! (A New Form of Colonisation)
တလောတုန်း က မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တခုမှာ … ကျနော်တို့ရဲ့ အိမ်န်ီးချင်း နိူင်ငံ တခုကို ရခိုင်ပြည်နယ် က လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး မြေတွေ နှစ်ရှည် ငှားရမ်း စိုက်ပျိုးခွင့် ပြုဘို့ သဘောတူ ဆိုပြီး ဖတ်လိုက် ရပါသည်။
အိမ်နီးချင်း ဖြစ်တဲ့ လာအို နိူင်ငံ မှာလည်း … ကူဝိတ်နိူင်ငံ မှ ဒေါ်လာ သန်း၂၀ အကုန်အကျခံ ၍ ဆည်မြောင်း များ ဖောက်လုပ်ကာ ကူဝိတ် သို့ ပြန်တင်ပို့ရန် အတွက် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် မည် ဟု သတင်း တပုဒ် ဖတ်ရ ပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိူင်ငံ မှ မြေသိမ်းခံ ရသော ပြည်သူများ
ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော နိူင်ငံ တခုမှ ဆင်းရဲတဲ့ နိူင်ငံ တခု သို့ လာရောက်၍ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီး မြုပ်နှံ လုပ်ကိုင် ခြင်းသည် ပြဿနာ တရပ် မဟုတ်ပါချေ၊ သို့သော်လည်း ဌာနေ တောင်သူလယ်သမား များ မိမိတို့ ၏ လယ်ယာမြေ များမှ မောင်းထုတ်ခံ ရခြင်း၊ တိုင်းပြည် အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မူ့ လျော့နည်း ကျဆင်း သွားခြင်း များဖြစ် လာခဲ့ ရင်တော့ အဲဒါဟာ တကယ့် ပြဿနာ ကြီး တခု ပါဘဲ။
တံခါးဖွင့် လိုက်ခြင်း၊ ပိတ်ပင်ထားမှုများ ဆိုင်းငံ့ ရုတ်သိမ်းလိုက် ခြင်းတို့ နှင့်အတူ မြန်မာနိူင်ငံတွင် ပြည်ပရင်းနှီး မြုပ်နှံ မှု များ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်လာ ကြ ပါ တော့မည် … နိူင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ တွေ ကို စိုက်ပျိုးမြေ များ ငှားရမ်း / ရောင်းချ ၍ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးမှု ကိုတော့ ကိုယ်တိုင် တောင်သူ လုပ်ငန်း လုပ်ခဲ့သူ တဦး အနေနှင့် ပြောရရင် အတော်ကြီး ကြပ်မ ဆောင်ရွက်စေ ချင်ပါသည်။
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးမြေ များ သိမ်းယူ၍ မြို့သစ် အကွက်ရိုတ် ပေးခြင်း၊ စက်မှုဇုံ များ ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ တပ်သစ်တည်ခြင်း တို့အပြင် Trans Myanmar ရေနံ နှင့် ဂက်စ်ပိုက် လိုင်း တည်ဆောက် ခြင်းတို့ကြောင့် ဆက်စပ် နေသည့် မြေယာတွေ စွန့်လွှတ်ရခြင်း၊ ဓါတ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း များ စနစ်တကျ မရှိခြင်း နှင့် မြေစာ မျောစာ များ စနစ်မရှိ ဖြစ်သလို စွန့်ပစ်ခြင်း တို့ကြောင့် လည်း တောင်သူတွေဟာ မိမိတို့၏ လယ်ယာမြေ များ လျော့နည်း / လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး လာနေကြ ခဲ့ ကြပါတယ်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် လယ်ယာမြေ တွေ လျော့နည်း လာနေကြတဲ့ အထဲမှာ မှ ….
သစ်တောတွေ အလွန်အကျွံ ခုတ်ယူခြင်း ကြောင့် စမ်းပေါက်တွေ ခန်းခြောက် ကုန်ပြီး စမ်းချောင်းလေးတွေ ရေမစီးတော့ တာ၊ ရေချောင်းတွေ ရေခန်းကုန်လို့ စိုက်ပျိုးရေ အတွက် ဒုက္ခရောက် ကြရတာ ဟာလည်း စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ ရဲ့ ဆုတ်ယုတ် မှု တခုပါ။
“ ရင်းနှီးမြုပ် နှံခြင်းလား … မြေသိမ်းပိုက်ခြင်းလား” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းဆောင်းပါး တပုဒ်မှာ လည်း ....
“နိူင်ငံရပ်ခြား မှ စိုက်ပျိုးမြေ များ ၀ယ်ယူခြင်း/ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်း များသည် နှစ် အနည်းငယ် လောက် အတွင်း မှာ ပင် လုံခြုံရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး တို့အတွက် ပေါက်ကွဲထွက် ရန် တာစူ နေသော ပြဿနာ တရပ် ဖြစ်လာနေချေပြီ။
မိမိ တိုင်းပြည် အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး ဖူလုံမှု ရှိစေရန် … တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ ဂျပန် နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ ရေနံသူဌေး နိူင်ငံ တို့သည် နိူင်ငံခြား တိုင်းပြည် များမှ စိုက်ပျိုးမြေ များဝယ်ယူခြင်း၊ နှစ်ရှည် ငှားရမ် ခြင်း သူ့ထက်ငါဦး လုပ်ဆောင် နေကြလေ သည်။ ယခုအခါ အနောက် နိူင်ငံ များကပါ အတုယူ ကာ လိုက်ပါ လုပ်ဆောင် လာနေကြ ပြီ ဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ - ၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ် ကာလ တခု အတွင်း မြေ ဧရိယာ ဟက်တာ ၂၀၃ သန်း နိုင်ငံရပ်ခြား ၏ ထိန်းချုပ် မူ့အောက် သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြောင်း Land Matrix ခေါ် စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့(online public database of large-scale land deals.) က ပြောပါသည်။ အဆိုပါ ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းမှာ ဗြိတိန် နိူင်ငံ အကျယ်အ၀န်း၏ ရှစ်ဆ ရှိသည် ဟုဆိုသည်။ http://landportal.info/landmatrix
Ethiopia, Liberia, Mozambique and Sudan နိူင်ငံ တို့သည် Land Rush အတွက် ပစ်မှတ် ထားရာ အဓိက အာဖရိက နိူင်ငံ များဖြစ်ပြီး …. အာရှတိုက်သည် လည်း ဒုတိယ ပစ်မှတ်ထားရာ ဒေသ တခုဖြစ် ကာ မြေဟက်တာ ၂၉ သန်း ရောင်းချ / ငှားရမ်းပြီး ခဲ့ကြောင်း ဆိုထားသည်။ နိူင်ငံသစ် တခုဖြစ်သည့် တောင်ဆူဒန် နိူင်ငံတွင် မြေ တစ်ဟက်တာ အတွက် မြန်မာငွေ ၂၀၀ ကျပ်ခန့်သော တန်ဘိုး နှင့် ညီမျှသည့် US 2.5 cent မျှ နှင့်ပင် ငှားရမ်း ရနိူင် သည်ဟု ဆိုသည်။ ( Below market-rate 10/ha annual payment for land )
သို့သော်လည်း … မည်သူက မည်သည့်နေရာတွင် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းကြောင့် မြေများ ၀ယ်ယူသည် စသည်ဖြင့် အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှင့် မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ မည်သည့် အခါတွင်မှ ထွက်ရှိလာ မည် တော့ မဟုတ်ပါချေ … အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် လွှဲပြောင်းခြင်း ၀ယ်ယူခြင်း များ ဆောင်ရွက် ရာတွင် မည်သည့် အခါတွင် မှ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုံး များမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဤ ကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ် မျိုး များ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မြေလွတ် မြေရိုင်းများ ဟု အမည်တပ်ပြီး ရောင်းဝယ်နေကြသည့် အဆိုပါ မြေယာ များမှာ အမှန်မှာတော့ ဆင်းရဲသားများ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်စားသောက် နေကြသည့် မြေနေရာ များဖြစ်နေ ကြသည်။ ဆင်းရဲသော တောင်သူလယ်သမား များမှာ အင်အားသုံး ခြိမ်းခြောက်၍ နှင်ထုတ်ခံ ရခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးမည် ဆိုပြီး ဂတိများ အဖျက်ခံရခြင်း ၊ နောက်ဆုံး လူဆိုးလူမိုက် များ ငှားရမ်း၍ အကြမ်းဖက် ဖယ်ရှားခံရခြင်း များ ခံကြရ လေသည်။
တချို့မှာ လည်း ဒေသခံ အမျိုးသမီး များ နှင့် လက်ထပ်ယူပြီး တဆင့်ခံ ပိုင်ရှင် ( Proxy Ownership) ဖြင့် နိူင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ မြေယာများ ရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။
ဤ ကိစ္စရပ် တွေရဲ့ အကျိုးဆက် များကတော့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဆင်းရဲသော နိူင်ငံ များမှ သန်းချီသော လယ်သမားများ မိမိတို့၏ လယ်ယာမြေ များမှ နှင်ထုတ် ခံရခြင်း၊ ဒေသ၏ ရေ အရင်းမြစ်များ လည်း အကြီးကျယ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကြီး များ အတွက် လွှဲယူ အသုံးချခံရ ခြင်း၊ ဓါတုပိုးသတ်ဆေး များ အမြောက်အများ သုံးစွဲမှုကြောင့် ဒေသ၀န်းကျင် ဂေဟစနစ် ထိခိုက် ပျက်စီးခြင်း။
အချုပ်ပြော ရသော် ဆင်းရဲသော တိုင်းပြည် များ မှ ဆင်းရဲသော တောင်သူလယ်သမားများ ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နှင့် ဘ၀ရပ်တည် မှု အတွက် အလုပ်ကိုင် များ သည် ချမ်းသာသော နိူင်ငံ များ၏ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး အတွက် လုယူခံရ စတေးခံ လိုက်ရ ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါသည်။
တနိူင်တပိုင် စိုက်ပျိုးသူ တောင်သူ များ အထူးသဖြင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်၏ အလုပ် အများစု ကို လုပ်ရပြီး အချိန်လည်း ပိုနှစ်မြုပ်ထား ကြရသော အမျိုးသမီး များအတွက် စိတ်ချလုံခြုံမှု ရှိသော လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့် အတွက် အစိုးရမှ အာမခံ သင့်ပေသည်။
ကိုးကား : The Straits Times (26 March 2012)
: Wikipedia ; Land Grabbing
: Google Images
Posted by mks at 3:56 PM2comments: Links to this post
Posted by mks at 8:09 PM No comments: Links to this post
Posted by mks at 11:08 PM No comments: Links to this post
ရန်ကုန် အောင်ပန်း တောင်ကြီး ကျောက်ပန်းတောင်း ပုဂံ ပခုက္ကူ ပုပ္ပါး
မနက်စောစော လွယ်မယ်တောင်ခြေ ဘက် လမ်းလျှောက်
တိုဖူး၂ပြန် ကြော် ဟင်းထုတ် ငချိတ်ပေါင်း စား
ဘူတာဘက် တပါတ် ပါတ်
ပုဂ္ဂလိက ဓါတ်ဆီဆိုင် ( ကာလာစုံ)
နိူ့ဆာပြီ အမေက တန်းမဖြုတ် သေး
လွယ်မယ်တောင် ပေါ်က မြို့သစ်ဘက် shoot
အောက်ဈေး ဘက် က အမြောက်တပ်သစ် ဘက် xxx
ပဉ္စရူပ (ရာသီချိန် မရောက်သေးလို့ Idling)
ဒီချိန် .. ဟိုတုန်းက ထင်းရူးသီးခြောက်တွေ လိုက်ကောက် မီးလှုံ တာ ပြန်သတိရ
ချယ်ရီ တွေလည်း ငုံလာခါစ ရှိသေးတယ် (ကလော အရှေ့ဘိုကုန်း)
၀ါးတားဂိတ် (၀ါးလုံးတွေ နဲ့တားလို့)
အောင်ပန်း-ကလော ကြား .. မလှဘူးလားဆရာ
ဒါလည်း ပုဂ္ဂလိက ဓါတ်ဆီဆိုင် ဘဲ ( ပင်လောင်းလမ်းခွဲ)
ကန်းထရီး ရို့ဒ် ( ရှေ့တကွေ့ဆို အောင်ပန်းတွေ့ရပါပြီ)
ပျက်အစဉ် ပြင် ခဏခဏ
ဒီဇင်ဘာ ကြီး ၃ရက်ဆက် မိုးရွာတာ ချမ်းချက်
လမ်းလွှဲ ပစ်လိုက်လို့ရတယ် ( ရထားလမ်းတလျှောက် ဇလီဖားတုံး တွေ ကြားမှာ ကျောက်ခဲ တွေ မရှိတော့ သလောက်ဘဲ )
ရေနွေးရွာ ( Hot Spring) . တောင်ကြီးတက်တဲ့ လမ်းဘေးမှာပါ။ ခုတော့ တောင်လေးလုံး ရွာမှာလည်း အ၀ီဇိ တွင်းတူးတာ ရေပူတွေ ထွက်လာလို့ ရေပူစိမ် ဖို့ ရွာအတွင်းထိ မောင်းဝင်ဘို့ မလိုတော့ပါ
တောင်ကြီး ညဈေး ( မင်းခွန်ကွား နှင့် ခွန်စိုးဝင်း တို့ရဲ့မြစ် .. အဖိုး စ၀်ပြည်ချုပ် ၀င်စားတဲ့ ...)
တောပြုတ်လို့ တောပြောင်ရင် မိုးခေါင်လိမ့်လေး
Mt. Popa .. 4981 ft
လွှတ် ... သံတိုင် တွေ ဆုပ်ထားတဲ့ လက်ကိုပြောတာ
ကျောက်ဖြူ ကူမင်း ၂လိုင်း မြုပ် မတဲ့။ ထန်းတပင် ၁၃၀၀၀ ကျပ် လျော် .. ထန်းလျက် က ဈေးမကောင်း .. လူငယ်တွေလည်း မြို့တက်ကုန်တော့ ထန်းတက်မည့်သူတွေ ... မရှိတော့ ဆိုဘဲ
ဖြတ်ကာ သွားမယ် မနားတယ်
မြင်းပေါ်က မောင်ရှင်လောင်း ..
ထိုးကွင်း နဲ့ နှဲဆရာ
ဘာဆုတွေ တောင်းထားလည်း သမီး
ရိုး ... မိုး
ရွာ့အလှု .. ဘိသိက်ဆရာ Chinese Tea break
ညီ နှင့် ညီမ တို့ ရဲ့ အလှု မှာ ရှင်တပါး ပါဝင်တာပါ
ရှင်လောင်း အမေ နိူ့သီးရှည် .... ဆွဲ ... (ရှိုးလိုက်)
ပခုက္ကူ ရွှေကူ တံကဲ
လက်ရှိ မြန်မာပြည် ရဲ့ အရှည်ဆုံးတံတား တဲ့ ညောင်ဦးနှင့် ပခုက္ကူ ၁၃မိုင် ဘဲဝေးတော့
ဒီ နံပါတ် 4D ကိုင် လိုက်ရအောင်
မှတ်မိလား ဘိုင်စကုတ် တကားထဲမှာလေ
ရေခပ် ဆင်းတဲ့ လုံမပျို
32-inch ... 15.1 MPa လို့ရေးထားတာဘဲ
အပေါ် က ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း ... လာပြီလေ လာပြီလေ .. ရန်ကုန်ဒါရိုတ်လေ .. ဟုတ်
How Long သီရိမင်္ဂလာဈေး
အရင် က “စနေ ပေးဒေး ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ”ဆိုတာ ခု ဘယ်သူ သိသေးလဲ မသိ
ရွှေတိဂုံ အရှေ့မုဒ် စောင်းတန်း
ပိုက်ဆံတွေ ပြန်သစ်လာ ပါပြီ ဆို ... ကြေကုန်တော့မယ်
Digital Display Screen မလိုပါဘူး ... Placard အကုန်ရေးထားတယ် .. အော်ပေးတယ် ..
မရှင်းသေးရင် ဖြေပေးဦးမယ် .. Air KBZ .. ဟဲဟိုး မန္တလေး ညောင်ဦး လေယာဉ်ထွက် ပါတော့မယ်
ဘေလီ တံတား ထပ်ထိုးသည်
အင်္ဂလန် မိတ် သရဖူတံဆိပ် တိုက်ပန်းကန် တချပ် သိန်းတရာ ဆိုလို့ ... ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ငချိ်တ်ပေါင်းက နဂိုလ် ကမှ မဲမဲ Flash မဖွင့်တော့ ...
Posted by mks at 10:12 PM2comments: Links to this post
Stop Land Grabbing Now! (A New Form of Colonisatio...